SalesRep.ai: Na-eji ọgụgụ isi eme ihe iji gbanwee Multi-Channel na-atụ anya mmekọrịta | Martech Zone
Dị ka nke a video si AhịaRep na-egosi, a nnukwu akụkụ nke outbound ahịa oge na-nọrọ ejikọta ma ọ bụ usoro ihe omume jikọọ na a ahịa. SalesRep na-eji akụrụngwa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, usoro nhazi asụsụ okike iji wepu mgbalị ahụ azụ ndị otu gị, na-enyere ha aka itinye uche ha niile na ire ere - ọ bụghị njikọ ahụ.
Ikpo okwu na-enye ndị ahịa ohere ịmepụta usoro eji eme ihe ozi email, olu, na ozi ederede SMS.
Ntinye dị mfe nke bọtịnụ na CRM gị na-amalite usoro ntinye maka usoro ọ bụla onye ahịa gị kwesịrị ijikọ. SalesRep na-esochi ụzọ na-eduga ọtụtụ ọnwa na-enweghị ike gwụrụ. Mgbe emeghị nkwekọrịta n'oge kọntaktị, gbakwunye ụzọ na ntanetị usoro usoro na ikpo okwu ga-eme ndị ọzọ.
Key Akụkụ nke SalesRep Gụnyere:
Soro usoro - Omume oku, ederede na sistemụ email ga-arụ iji laa mgbe ndu ọ bụla gasịrị. SalesRep.ai na - arụ ọrụ na nzukọ gị na - arụ ọrụ nke ọma iji guzobe usoro dabere na ebe ahịa ahịa gị dị. Ọ bụrụ na ịgabitabeghị onye ndu, a ga-eme usoro ihe kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ị na-esote n'ahịa ahịa gara aga, a malitere ịmalite iche. Tinye usoro ntinye ọ bụla achọrọ na SalesRep.ai.
Ekwentị na-akpọ na local ọnụnọ - SalesRep.ai ga - akpọ ndu na nnọchite gị oge niile na ogologo oge ịchọrọ. SalesRep.ai ga - akpọ site na ọnụọgụ mpaghara ma ghara inye nsogbu gị ruo mgbe ha ga - ebute akara ahụ. Ozugbo ha mere - SalesRep.ai ga-agwa ha ihe oku ahụ na-ekwu, ọ ga-ejikọrịrị na onye nnọchi anya gị ma ọ bụ ngalaba oriri gị. Ọ bụrụ na enweghị ụzọ, SalesRep.ai ga-ahapụ ozi olu ma ọ bụ kwụghachi iji kpọghachi azụ n'oge ọzọ.
AI SMS na ozi ịntanetị - A na-eziga SMS site na nọmba mpaghara ma zigara ozi ịntanetị site na akaụntụ nke onwe gị dịka ọ bụrụ na ha na-eziga ha. Site na mmemme AI, mgbe SaleRep.ai na-anata ozi site na ndu, ọ nwere ike ịghọta ihe ọ pụtara ma mee ya. AI nwere ike iji nkwanye ùgwù Kwụsị ma ọ bụ Kwụsị usoro; Hazie ma ọ bụ Bugharia oku; ma zaa ajuju di mfe ka ikwesighi.
Nke a bụ nseta ihuenyo nke otu esi arụ ọrụ igwe ha nwere ike ịmepụta:
Usoro a sara mbara, yana ike ịbanye n'ime ndị ahịa ọ bụla, azụmahịa ọ bụla, yana nzaghachi ọ bụla.
Ọbụna ha na-enye ndọtị Chrome:
Mmekọrịta gụnyere Salesforce, Velocify, Microsoft Dynamics, Hubspot, na Infusionsoft. N'iji SalesRep.ai, ụlọ ọrụ nwere ike izere ịhapụ ndị ahịa, nwere ike ịhapụ oge ịre ahịa maka ịre ahịa, ma mechaa mechie ndị ahịa.
Tags: ainhazi ogeọgụgụ isiokpokoroMicrosoftIhe omimi Microsoftntọala oge ịre ahịaakpaaka ahịaokuusoro ahịandị ahịaire ahiairere.a.aọsọ ọsọ